Heshiiskayga Kansala Oo Bixiya....-Lacagta Uu Mesut Ozil Ka Dalbaday Arsenal Si Uu Emirates Stadium Uga Baxo Oo Lasoo Bandhigay - Gool24.Net
Heshiiskayga Kansala Oo Bixiya….-Lacagta Uu Mesut Ozil Ka Dalbaday Arsenal Si Uu Emirates Stadium Uga Baxo Oo Lasoo Bandhigay
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Arsenal ee Mesut Ozil ayaa u sheegay kooxdiisa lacagta uu ka doonayo haddiiba ay kansalayaan heshiiska uu ku joogo Emirates Stadium oo uu sanadkiisii ugu dambeeyay kaga jiro haatan.
Kubad sameeyahan kusoo guuleystay koobka aduunka ayaan meelnaba kaga ag-dhawayn qorshayaasha tababare Mikel Arteta iyadoo xataa dhawaan laga reebay liiska kooxda ee UEFA Europe League ciyaaraya.
Mesut Ozil oo 31 sano jir ah ayaa kooxda ka diiday in la dhimo mushaharkiisa 350,000 ee Pound ah usbuucii kaddib saamayntii dhaqaale ee xanuunka Korona isagoo sidoo kale kooxda kaga cadhaysiiyay inuu mushahar u qoray Gunnersaurus oo sumad u ahaa kooxda.
Arsenal ayaa hadda ku fikirtay inay gabi ahaanba iska kansasho heshiiska Ozil ee dhacaya xagaaga dambe si ay mid sarreeya uga sii dhigaan dareenka xamaasadeen ee xiddigaha kooxda xilli ay qaab fiican xilli ciyaareedka ku bilawdeen.
Wargeyska ree England ee The Sun ayaa soo tabinaya in kooxdu ay wadahadalada heshiiskiisa lagu kansalayo dib ula bilaabayso Ozil iyagoo ka wadahadlaya lacagta ay siinayaan ee qandaraaskiisa.
Warbixinta ayaa sheegaysa in maamulka sarre ee Gunners ay rabaan inay bisha January iska fasaxaan Ozil balse ciyaaryahanku uu doonayo in lacagta qandaraaskiisa ka hadhsan oo dhan la siiyo haddiiba lagu qasbayo bixitaan oo heshiiskiisa la baabiinayo.
Sagaalka bilood ee ka hadhsan qandaraaska Ozil ayuu ciyaaryahanku si layaab leh u shaqeysan lahaa lacag 13 Milyan oo Pound ah waana lacagta uu haatan dalbanayo in jeebka loogu shubo haddii la dirayo.
Agaasimaha Arsenal ee Edu ayaa sheegay inay Mesut si cadaan ah ugu sheegeen in laga reebayo liiska Europe League ee kooxda kahor intii aan si rasmi ah loo shaacin maalmo kahor.